मधुमेहलाई खानपानको माध्यमबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कतिपय खाद्यपदार्थ मधुमेहमा बर्जित छ भने, कति खानेकुरा सेवन लाभदायक मानिन्छ ।
चुकन्दरमा पोटाशियम र भिटानि सी भरपुर मात्रामा हुन्छ । यसको सेवनले मधुमेहको रोगीलाई हुने थकान कम हुनछ र काम गर्नका लागि ताकत पनि मिल्छ ।
करेलाले शरीरमा ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण राख्छ । यसैले मधुमेह रोगीले खानामा करेला सामेल गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
शखरखन्डमा एन्डिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
पालुङ्गोमा म्याग्निसियम, फोलेट र पोटाशियम पाइन्छ । यसले मधुमेह नियन्त्रण राख्न सहयोग गर्छ ।
भिन्डी मधुमेह रोगीका लागि धेरै लाभदायक हुन्छ । यसलाई काँचै वा पकाएर खान सकिन्छ । यसको सेवनले ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण हुन्छ ।
बन्दगोभी नियमित खानाले शरीरमा इन्सुलिनको स्तर नियन्त्रित हुन्छ । यसले तौल घटाउन समेत सहयोग गर्छ ।
मधुमेह रोगकिा लागि बैगुनको सेवन लाभदायक हुन्छ । यसले ब्लड सुगरको लेभल बढ्न दिदैन । साथै इन्सुलिनको उत्पादनपनि नियन्त्रण राख्छ ।
एक अध्ययन अनुसार बिहान खाली पेटमा लौकाको जुस पिउनाले मधुमेहसम्बन्धी रोगबाट छुटकारा पाइन्छ ।
प्याजमा केहि यस्ता एसिड पाइन्छ, जसले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्न दिदैन । ब्लस सुगर लेभल पनि सन्तुलित राख्छ ।
काउलीमा फाइबर पाइन्छ । यसले शरीरको विषाक्त पदार्थ वाहिर निकाल्छ । यसले मधुमेह रोगीको लागि यो लाभदायक हुन्छ ।
यसरी भोजन व्यवस्थापन गरेर नियन्त्रण गरौ मधुमेह
उचित र सन्तुलित खानपानले मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मधुमेहमा व्यायाम एवं सक्रिय जीवनशैली जति आवश्यक छ, उत्तिनै भोजन व्यवस्थापन पनि । त्यसैले कति खाने, के खाने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सक्नुपर्छ ।
कार्वोहाइडेड, प्रोटिन, भिटामिन, लिपिड, पानी, रेशा, एन्टिअक्सिडेन्ट र खनिज तथा लवणहरुको समुचित मात्राले मधुमेहलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । जति सकिन्छ, ताजा र मौसमी फलफूल, खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ ।
एकै पटकमा धेरै होइन, थोरै-थोरै खानेकुरा तर पटक-पटक खाइरहनुपर्छ । सन्तुलित र सहि खानपानसँगै शारीरिक व्यायाम आवश्यक हुन्छ ।
मधुमेहमा खान सकिने फलफूल
अमला, कागती, सुन्तला, मेवा, खरबुजा, नास्पाती, बेल, जमुना, मौसम, खान सकिन्छ ।
स्याउ, स्टोबेरी, अंजिर जस्ता फल कम मात्रामा खान सकिन्छ ।
खानासँग फल सेवन नगर्ने । १५० ग्राम फलफूूल दिनमा तीन देखि पाँच पटक खाने । खानामा पनि भेज-सलाद लिने गरौ । मधुमेहको रोगीलाई भोक ज्यादा लागिरहने हुँदा भोक लागेको बेलामा यि फलहरु लिनुपर्छ ।
कस्तो सागपात खाने ?
लट्टेको साग, बेथेको साग, तोरीको साग, पालुंगोको साग, मेथीको साग, रायोको साग, तितेकरेला, चुच्चे करेला, फर्सिको मुन्टा, कलिलो फर्सि, झिंगनी, रामतोरीया, घिरौला, लौका, भेडे खुर्सानी, सलगम, मुला, हरियो सिमी, बोडी, लसुन, तथा प्याजको पत्ता कडी पत्ता आदि सेवन गर्नु राम्रो हो ।
अन्न दाल गेडागुडीः
रातो चामल, बोक्रासँग पकाएको दाल, गहुँको खस्रो पिठो, दलिया, मकैको च्याख्ला, आँटो, फापर, कोदो, सामा कागुनी, वा जौको भात, वा ढिडो । भुटेको मकै, भटमास,चना, अंकुरित गेडागुडी, ओटमिल, कर्नफेल्क्स, ब्राउन ब्रेड ।
करेला,अमला, पालुंगो, लौका, सलगम, कोभी, बन्दाकोभी, एलियोभेरा (घीउकुमारी) गहुँको जमराको जुस ।
हिमाली सातपाते / बतासे (प्यानक्स जिनसिङ्ग), हर्माल जडी -गलेगा अफिसिनालिस), तीते करेला (मेमोरडीका क्यारेन्सीया), मेथी (ट्रीगोनेल फेनम ग्रेकम), गुुडमार (जिम्नेमा सुुवेष्टा), लसुन -एलिएम सटाइवम), प्याज -एलिएम सेपा), घ्युु कुुमारी (एलोभेरा रा), बिलबेरी (वक्सिनिअम मार्टिलस)
खानैपर्ने सूूक्ष्म पोषक तत्वहरू
क्रोमियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, क्यालसियम, पोटासियम, भेनाडाईल सल्फेट, एल- कार्निटीन्, एल- आर्जिनिन्, टउरीन, भिटामिन ई, भिटामिन सी, भिटामिन बी-६ -पेरिडोक्सीन), बायोटीन, ग्लुुटाथायोन, ओमेगा -३, कोईन्जाइम क्यु-१०, लिपोईक एसिड ।
परहेज गर्नु पर्ने
१. गुलिया चिज : मिठाई चकलेट , चिनी, मिस्री, सख्खर हालेको खाद्यान्नहरु, आइसक्रिम
२. तेलमा तारेका परिकारहरु : सेल,अर्सा, अनर्सा, पत्रे, कुराउनी, गुदपाक, कसार, पुरी, जुलेबी,स्वारी, बर्फी र अन्य मिठाई आदि
३. मीठो गुलियो फलफूल : केरा, स्याउ, आँप, चुकन्दर, अंगुर, लिची, सरिफा, गाजर, किम्बु, नरिवल, कटहर, भुइंकटहर
४. कन्दमूल : आलु, पिडालु, सुठुनी, अखी, ओल, तरुल, सिमल-तरुल, गाजर, चुकन्दर आदी
५. नून धेरै हालेको चिनी, धेरै हालेको , मैदाका परिकार
६. घ्यू वनस्पति घ्यू मा बनेका परिकार
७. इनर्जी , कार्वोहाइडे्रट र स्विट्स ड्रिंक
८. बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी र चाइनिज फुड जस्ता परिकार जंक फुड
९. चिया, कफी, मिल्कसेक, माछा, माुसु, बोसो आदि
घ्यू तेलको मात्रालाई अत्यन्त कम गरौं तौल ज्यादा भएका र मधुमेह सँगै कोलस्ट्रोलका समस्या भएकाले तेल रहित (जीरो आयल) कुकिङ्ग को विधि सिकेर तेल घ्यू छोडी दिऔं । खानै पर्नेहरुले सूर्यमुखी, आलस , तोरी, भटमास वा जैतुनको तेल खाने गरौं । घ्यू, माछामासु र बोसो सेवन नगरौ ।
तर निकालेको दूध दही पनिर हल्का खान सकिन्छ । चिनी नहालेको दूध चिया दिनमा २ कप सम्म लिन सकिन्छ । ग्रीन टि, जडीबुटी हालेको मोही, मह र कागती पनि लिन सकिन्छ ।
सकभर माछामासु नखाएकै राम्रो हो । बोसो भएको मासु खान हुँदैन। माछा लोकल कुखुरा लौकट वा हाँसको मासु अण्डाको सेतो भाग (उसिनेको) खान सकिन्छ । माछामासु खानेले खसी बोका ,भेडा , च्याङ्ग्रा, रागा , भैंसी र बंगुर जस्ता जनावरको मासु खानु हुँदैन ।
मधुुमेहका रोगीलाई चिनी रहित गुुलिया पदार्थको सेवन गर्न सल्लाह दिईन्छ तर यसका धेरै साईड ईफेक्टहरू छन् ।
खाना लिदा विशेसतः लो ग्लाइसेमिक इटिङ्गका सिद्धान्तहरु पालन गर्नुु पर्छः त्यसकालागी निम्न कुुरो ध्यान दिन आवश्यक छ ।
· चिनी हालेको खानेकुराहरूको परहेज गर्ने गरौं ।
· पानी धेरै भएका फाइबर रेसा र चोकरदार खानेकुरा सेवन गर्ने ।
· अन्न दाल गेडागुडी लाई सकभर सग्लै पकाएर खाने गरे धेरै प्रोसेस गरेको खाद्यान्न
· स्टार्च धेरै भएका खानेकुराहरुको उपयोग सावधानी पूर्वक गरौं
· ढिलो पच्ने खानेकुराहरु जस्तै उमारेका गेडागेडी, सागपात , क्वाटी खाने बानी बसालौं
· सेचुरेटेड फ्याट को उपयोग कम गरेर पोली अनसेचुरेटेड फ्याट जस्तै जैतुनको तेल बदाम भटमास सुर्यमुखीको तेल खानुपर्छ ।
· एकैचोटी धेरै खाना नखाऔं थोरै थोरै गरेर धेरै पटक खानुपर्छ ।
बहुउपयोगी ड्रागन फल : स्वादिष्टसँगै स्वास्थ्यवर्द्धक पनि
जिब्रोको रंग हेरेर थाहा पाउनुहोस्, तपाईं स्वस्थ कि अस्वस्थ ?
सावधान, नुन चर्को खाँदा जानसक्छ ज्यान
यी हुन् पिसाव पोल्ने कारण र समाधानका घरेलु उपायहरू
मैले खानै जानेको रहेनछु !